Khabiir ku takhasusay khubarada caalamiga ah ee "Sparters". Noqo Safe!
Haddii aad heshay tiro farabadan oo la xidhiidha dukaamada online-ka ah ama dadka codsanaya lacag, waxaa jira fursado ah in spamerku qiyaasi aqoonsigaaga oo uu bilaabo inuu kuu diro farriimo been abuur ah. Qaybtii hore ee 2011, badankooda spam ee sanduuqdayada ayaa loo adeegsaday inay ka yimaadaan Hindiya. Ilaa 2016-kii, dalalka ugu sarreysa ee spam-ka ah ayaa ah India (20%), Indonesia (13%), Ruushka (10%) iyo Koonfurta Kuuriya (12%).
Nik Chaykovskiy, Maareeyaha Guusha Guud ee Macaamiisha ee Semalt , wuxuu eegayaa halkan xaqiiqda ugu adag ee ku saabsan spamka aduunka - flost superannuation.
Ruushku wuxuu caan ku yahay cybercriminals iyo baandooyinka sida Facebook. Sida laga soo xigtay Trend Micro, oo ah shirkad caan ah oo shirkad Californiya ah, Ruushku hadda waa la hormarinayaa marka ay timaado khiyaamo internetka ah iyo spam. Warbixinta Trend Micro ayaa muujisay in dhacdooyinka ugu muuqashada badan sida Whitney Houston dhimashada degdega ah, siyoshiistu ay kor u kacday adduunka, iyo Linsanity waxay bixisay cybercriminals cybercriminals oo leh qalabka cusub ee bulshada iyo fikradaha ololaha. Waxay ka caawisay inay qaadsiiyaan oo ay galaan tiro badan oo aqoonsi email ah iyo shabakado si ay u hellaan xogtayada gaarka ah.
Ilaa boqolkiiba siddeetan ee spam ee la beegsanayo internetka waxaa soo saaray koox ka badan 100 qof, dhammaantood waxay ka tirsan yihiin baandooyinka spam. Magaca burcadkan waa Spamhaus. Diiwaanka diiwaangelinta ee loo yaqaan "Spox Operations" (ROKSO) ayaa sababay dhibaatooyin badan oo internetka ah..Dhowr sano ka hor, spammer-ku salaysan oo ku salaysan Ukraine ayaa malaayiin ka mid ah nacas iyo fayras isticmaalaya iyada oo la isticmaalayo teknoolojiyada khaaska ah. Kooxda martida u ah spammer ayaa ah shirkad fadhigeedu yahay China-based web hosting company, Trend Micro ayaa soo warisay. Michael Boehm iyo Associates waxay ahayd urur Maraykan ah, oo ka kooban tiro badan oo spamka ah. Waxay u direen spam iyo fayras si toos ah internetka, abuuraya dhibaatooyin dadka isticmaala kala duwan. Ujeeddadoodii ugu muhiimsanaa waxay ahaayeen liisaska la xoqay, waxayna ku hawlgalaan ganacsi iyo magacyo gaar ah.
Yair Shalev wuxuu ahaa spammer gaarsiisan oo heer sare ah oo ka yimid Florida. Wuxuu iskaashi la yeeshay spammer ROKSO, Darrin Wohl, si loo horumariyo teknooloojiyada si loo burburiyo tiro badan oo kombuyuutar iyo qalab mobile ah dunida oo dhan. Dante Jimenez wuxuu ahaa aabe ku-salaysan Maraykanka oo ka shaqeyn jiray khubarada cybercriminals iyo khubarada botnet adduunka. Waxa uu ku hawlanaa mashaariic kala duwan oo loo yaqaan 'botnet' kala duwan oo uu horey u ahaa qashin-gelinta server-yada iyo boggaga caanka ah ee wararka. Peter Severa wuxuu ahaa spammer xirfadeed oo Ruush ah kaas oo qoray oo ku iibiyey barnaamijyo fara badan oo fayruus ah, spamware, iyo botnets malaayiin ilaa balaayiin doolar. Waxa uu sidoo kale ku lug lahaa qorista iyo sii daayay trojans iyo fayraska ugu xun. Waxa uu la shaqeeyay spammers kala duwan oo Yurub iyo Maraykan ah, isla markaana wuxuu la shaqeeyay spammer-ku-saleysan Maraykanka, Alan Ralsky.
Michael Persaud waxaa xiray FBI bilo yar ka hor. Waxa uu ku lug lahaa khiyaamo fara badan waxaana lagu eedeeyay hawlgallo kala duwan. Yambo Financials waa spammer kale oo ukun ah oo ku lug lahaa cybercrimes kala duwan. Wuxuu horumariyey barnaamijyo badan oo budhcad-badeed ah waxaana lagu iibiyey malaayiin doolar. Wuxuu sidoo kale sameeyay bangi akoontiyo been abuur ah oo internet-ka ah oo laga xaday lacag badan oo ka soo baxday xisaabaadka bangiyada sharci ah. Ilaa hadda, spammer waxaa lagu eedeeyey dambiyo kala duwan, FBIna waa ka dambeeyaa. Hore ama ka dib, waa la xiri doonaa, warbixinnada Trend Micro